Ciidamo ka shaqeeya Garoomo duulimaad oo laga mamnuucay inay qoslaan ama farxaan - Caasimada Online
Home Dunida Ciidamo ka shaqeeya Garoomo duulimaad oo laga mamnuucay inay qoslaan ama farxaan
Ciidamo ka shaqeeya Garoomo duulimaad oo laga mamnuucay inay qoslaan ama farxaan
Muqdisho (Caasimada Online) – Warbaahinta dalka India ayaa shaaca ka qaaday in dowladu ay mamnuucday in ciidamada ka howlgala Garoomada dalkeeda laga mamnuucay dhoola caddeynta badan.
Wargeyska Indian Express ayaa qoray in markaasi si rasmi ah looga dhaqan galiyay Garoomada ay ka howlgalaan Ciidamada booliska si looga feejignaada dhibaato amni daro oo ka dhalata furfurnaanta xad dhaafka ah.
Waxa uu qoray in mamnuucidan ay tahay mid la xiriirta walaac laga qabo in farxadda badan ay horseedi karto habacsanaan dhinaca sugidda ammaanka ah iyo halis ku saabsan weerarro argagixiso.
Ciidamada ayaa lagu wargaliyay inay iska ilaawan wada qosolka iyo inay la dhoola cadeeyan dadka Garoomada u jooga Safarada.
Saraakiisha Hay’adda Booliska India oo u waramaayay warbaahinta Indian Express ayaa sheegay in ujeedka ka danbeysa mamnuucida uu yahay iney doonayaan in shaqaalahooda ay si weyn u feejignaadaan intii ay farxad iyo saaxiibtinnimo ka muuqan lahayd.
Waxa ay sheegen in nidaamka shaqo ay kamid noqotay in ciidamada ay xaddidaan wakhtiyada ay waji furnaanta leeyihiin.
Sidoo kale, agaasimaha hay’adda amniga garoomada India Rajesh Ranjan ayaa sheegay in xitaa weerarkii mareykanka laga geystay 11-kii bishii Siteembar ee sannadkii 2001-dii ay sabab u ahad waji furnaanta xad dhaafka ah ee loo muujiyay rakaabka diyaaradaha.
Wuxuu ku nuux-nuuxsaday in furfurnaanta badan iyo sheekeysiga ay garoomada diyaaradaha galinayaan khatar uga imaata weerarrada argagixiso.
Si kastaba ha ahaatee, India ayaa kamid ah dowladaha xooga saara arrimaha amniga waxaana xusid mudan inaan lagu tirin wadamada ay ka jiraan qalalaasaha amni.